Iindaba - I-TIG ye-welding sheet yentsimbi: ifanelekile ukuwelda amashiti amancinci
I-TIG ye-welding sheet yentsimbi: ifanelekile ukuwelda amashiti amancinci
Ukuwelda kwe-TIG ilungele ngokukodwa ukuwelda icwecwe lesinyithi elicekethekileyo kwaye ingasetyenziselwa ukuwelda ngokuqhubekayo kunye namabala.Funda ngakumbi malunga neempawu zayo.
I-TIG (i-Tungsten Inert Gas) i-welding sheet sheet ngokuqinisekileyo yenye yezona ndlela ziqhelekileyo ze-welding.Le yi-inkqubo ye-arc welding kunye ne-infusible(i-tungsten)i-electrode,ikhuselwe yigesi engasebenziyo(iigesi ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo ziyi-argon okanye i-helium), enokwenziwa okanye ngaphandle kwentsimbi yokuzalisa.
I-TIG welding ifanelekile ngokukodwawelding sheet metalkwaye ingasetyenziselwa zombini ukuqhubeka kunye neendawo zokuwelda.Ubuchwephesha bokuwelda buthe baqale baphuhliswa kushishino lwenqwelomoya ngexesha leMfazwe yesibini yeHlabathi, ukuze kuthathelwe indawo iirivethi ngeentsimbi zokutshisela kwiinqwelomoya (zikhaphukhaphu kakhulu ngokuxhathisa okufanayo).Ukusukela ngoko, ukusetyenziswa kwayo kwicandelo loshishino kuye kwanda kakhulu.
TIG welding sheet metal ibonelelaumgangatho ophezulu wamalungakwaye ke ngoko ifaneleke ngokukodwa ukuwelda amashiti abhityileyo, ngokungafaniyo nobuchule bemveli bokuwelda apho umngcipheko wokugqobhoza isinyithi uphezulu.
I-TIG (i-Tungsten Inert Gas) i-Welding idla ngokusetyenziswa ukuwelda iziqwenga ezibhityileyo zentsimbi engatyiwayo kunye neentsimbi ezingenayo i-ferrous ezifana ne-aluminiyam, i-magnesium, kunye ne-alloys zethusi.
Inkqubo ye-welding eguquguqukayo eneziphumo eziphezulu
Inkqubo enzima ifuna iqondo eliphezulu lobuchule
Inkqubo yokuwelda icotha ngakumbi;ivelisa i-weld ekhangelekayo ephezulu
Inokuvelisa iiwelds ezinobuqili, ezinje ngerawundi okanye ii-S curves
Isebenza njani i-TIG welding sheet yentsimbi
Kwi-TIG welding, izinto eziphathekayo zinikezelwangesandlangoncedo lwebhariokanye ngokuzenzekelayongocingo oluphothiweyo.Le nkqubo ifanelekile ukwenza i-welds esemgangathweni ophezulu kwimekoukudibanisa ubungqingqwa bentsimbi engenastainlessngokunyibilikisa imiphetho, kunye nezongezo ezincinci zezinto (kwezinye iimeko nangaphandle kwezinto zokuzalisa).
UkuyaTIG weld amaphepha amancinci, aitotshiisetyenziswe apho i-electrode ye-tungsten ifakwe khona, apho igesi ye-inert ekhuselayo igeleza kwibhafu yokunyibilika.Umsebenzisi uhambisa itotshi ecaleni kwendawo edibeneyoukuhambisa ibhafu enyibilikayo, ukubeka i-electrode ye-tungsten engasebenziyo kumgama omkhulu weemilimitha ezimbalwa kwayeukugcina lo mgama uzinzile.
Ngexesha lokusebenza kubaluleke kakhulu ukukhusela i-electrode ekudibaneni ngokuthe ngqo kunye neqhekeza eliza kuxutywa, kuba intonga ye-tungsten iya kunamathela kwi-joint kwaye iyeke ukuwelda.
I-Thyhmetalfab: inqaku lakho lereferensi ye-TIG welding sheet elicwecwe lesinyithi
Le nkqubo ye-welding sheet sisisombululo esihle kakhulu sokufumana iziphumo ngaphandle kwee-burrs, kodwa kuthathaabaqhubi abakhethekileyo, ngakumbi xa kuziwa ekuphatheni amaphepha amancinci, ukufumana imeko yobugcisa be-TIG welding.
KwiMinifaber thinaTIG weld sheet metal endlini, kwindawo ekhuselweyo nelawulwayo, ngaloo ndlela ukwandisa amaxesha kunye neendleko zokudala iimveliso ezinzima, ezigqityiweyo okanye ezigqityiweyo.
Ukubaleka kwethu komatshini kubandakanya i-MIG-TIG anthropomorphic welding irobhothi kunyeOomatshini be-welding aba-8 abakhethekileyo ngokupheleleyo kwi-TIG, apho senza zombini iimveliso ezigqityiweyo kunye nezigqityiweyo ezinexabiso eliphezulu elongezelelweyo.